kuendesa gearbox bhokisi, helical gearbox kugadziriswa
conveyor gearbox uye helical gearbox kugadzirisa
Maitiro ekuchengetedza giya bhokisi?
Mushure mekutsva kwegiya bhokisi riri kushandiswa anenge maawa e400 kana mwedzi ye3, lubrication inoda kuchinjwa. Mushure meizvozvo, iyo yekushandurwa kwemafuta iri anenge ese maawa e4000; ndapota usasanganisa-shandisa mabhurukwa akasiyana emafuta ekubikisa. Inofanirwa kuchengetedza yakaringana huwandu hwemafuta emukati megiringi bhokisi uye woitarisisa. Kana zvichinge zvaonekwa kuti lubrication yasvibiswa kana huwandu hwacho hwaderedzwa, lubrication inofanira kuchinjwa kana kuzadzwa nenguva.
Chii chatinofanira kuita kana giya rebhokisi raputsika?
Kana giya riri kuputsika, usatsemura zvikamu kutanga. Ndokumbirawo ubate hama inomiririra yekutengesa kuDhipatimendi Rekunze Rekutengesa uye upe ruzivo rwunoratidzwa pazita rezita, senge gearbox tsananguro ans serial nhamba; nguva yakashandiswa; mhando yekukanganisa pamwe nekuwanda kwevanonetsekana. Pakupedzisira tora danho rakakodzera.
a) Yadzivirirwa kubva kunaya, chando, unyoro, guruva nemhedzisiro.
b) Isa matanda emapuranga kana zvimwewo zvinhu pakati pegiya bhokisi nepasi.
c) Akavhurika asi asina kushandiswa magiya anofanirwa kuwedzerwa pamwe neanorwisa-ngura mafuta pamusoro pawo, uye ozodzokera mumudziyo munguva.
d) Kana iro giya rakachengetwa kwemakore maviri kana kunyangwe nguva yakareba, ndokumbira utarise utsanana uye kukuvara kwemamishini uye kuti iyo anti-ngura dura ichiripo panguva yekutarisa kwese.
Chii chatinofanira kuita kana zvisingawanzoitika uye kunyange ruzha runoitika panguva yegiya bhokisi richimhanya?
Izvo zvinokonzerwa nemhete isina kukodzera pakati pemagiya kana kubereka inokuvadzwa. Mhinduro inogoneka ndeyekutarisa lubrication uye shandura fani. Uyezve, iwe unogona zvakare kukumbira mumiriri wedu wekutengesa kuti uwane imwe yambiro.
Chii chatichaita nezvekuzevha kwemafuta?
Simbisa mabhandari pamusoro pegiya bhokisi uye cherekedza iyo unit. Kana iyo mafuta ichiri kuvuza, ndapota taura nemumiriri wedu wekutengesa kuDhipatimendi Rezvekutengesa Kunze.
Ndeapi maindasitiri ma gearbox ako ari kushandiswa?
Ma gearbox edu anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzemachira, kugadzira chikafu, chinwiwa, indasitiri yemakemikari, anokwira, otomatiki chengetedza michina, simbi
Unotengesa mota here?
Tine vatyairi vezimotokari vakagadzikana avo vanga vachishanda nesu kwenguva yakareba. Vanogona kupa mota nemhando yepamusoro.
Ndeipi yako chigadzirwa warrenty nguva?
Isu tinopa gore rimwe chete warrenty kubva musi wekubva kwechikepe chakasiya China.
Chero Mubvunzo? Titevere!
Mhando dzemagetsi mota
Induction Motsi, AC mota
Mechanic kusiana kumhanya kumhanya
Helical gear, Worm gear, Planetary gear, Planetary giya mota, cycloidal magiya, Spiral Bevel Gear mota, Worm Gear Motors, Cycloidal Gear Motor
Mhando dzegiya bhokisi rine mifananidzo
Helical magiya, Spiral bevel magiya, Bevel magiya
Electric mota uye gearbox kusanganisa
Sumitomo mhando cyclo
Kuderedza gearbox yemagetsi mota
Skew Bevel Gear Bhokisi
Spiral bevel magiya, Bevel magiya